Sniper: Ghost Warrior (2010) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Game » Sniper: Ghost Warrior (2010)
By နေမင်းမောင်3:45 AM38 comments
ဒီတစ်ခါကျွန်တော် ဂိမ်းကောင်းကောင်းဆော့လိုသူများအတွက် ကျွန်တော်လည်း အနှစ်သက်ဆုံး ဂိမ်းလေးတစ် ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အောက်မှာလည်း ဒီဂိမ်းလေးရဲ့ ပုံလေးတွေကိုပြပေးထားပါတယ်။ ဂိမ်းကနည်းနည်း လေးတော့ ကြီးပါတယ်။ သူ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကတော့ ကျွန်တော် တို့ Processor အနေနဲ့ အနည်းဆုံး 1.8 GHz Intel Core2 Duo / 2.4 GHz AMD Athlon X2 64 အထိရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Memory အနေနဲ့က 1,5 GB (Windows XP) /2GB (Windows Vista, Windows 7) အထိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Video Card မှာတော့ အနည်းဆုံး 256 MB ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအားလုံးပေါင်း 200 MB စီနဲ့ 22 ပိုင်းရှိပါတယ်။ Mediafire မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
Mediafire မှာ Password ခံထားပါတယ်။ Password ကတော့
ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ အားလုံးပေါင်း 3.9 G ရှိပါတယ်။ ဖြေးဖြေးခြင်းသာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ သူ့အ တွက် ပုံလေးတွေကတော့ အောက်မှာပြပေးထားပါတယ်။
နှစ်သက်သူများကတော့ အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ကျွန်တော် Password ကိုထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ လင့်ခ်လေးတွေမသေခင်ယူ ထားလိုက်ပါဗျာ။ Download လင့်ခ်လေးတွေကို အောက်မှာထပ် တင်ပေးထား ပါတယ်။ ကျွန်တော် ထပ်စစ်ပြီးထပ်တင်ပေးထားပါတယ်။ သည်းခံပြီး ယူပေးပါခင်ဗျာ။လင့်ခ်တွေ ကို Notepad နဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာယူလိုက်ပါ။
နေမင်းမောင် September 29, 2011 at 1:23 PM
ပြည် သွားပါတယ်အစ်ကို။မရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်လုပ်
zawzaw media September 29, 2011 at 6:29 PM
i already download most of this Sinaper Rar, but i can not download "sr sgw.part01.rar." very problem, how to do, how can i get this Part-1...
do something for me.......
zawzaw media September 29, 2011 at 6:33 PM
putra September 29, 2011 at 8:55 PM
ကိုနေ ကျွန်တော့်ဆီမှာ media fire ကဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး...ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး
zawhtay October 1, 2011 at 12:23 AM
ဖြည်လို့ မဘူး ကူညီပေးပါအုံး ညီလေး ။
နေမင်းမောင် October 1, 2011 at 4:21 AM
ဟုတ်ကဲ့အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်တစ်ချက်လိုသွားပါတယ်အစ်ကို တောင်းပန်ပါ တယ်ဗျာ။ နောက်ဆုံးအပိုင်း 22 မှာ sr- sgw.part22.rar ဆိုပြီး Rename လေးပြောင်း ပေးပေးပါအစ်ကို။ အဲ့ဒါဆိုအဆင် ပြေပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
crusekoole October 1, 2011 at 3:29 PM
ကျွန်တော် ဒေါင်းလို့ မရဘူးဗျာ
ဒေါင်းလုပ် box ကျလာပြီး save file လုပ်တာ firefox download box ကျလာပြီးတော့o byte နဲ့complete ပြနေတယ် ကူညီပေးပါအုံး အကို
zawhtay October 2, 2011 at 1:34 AM
အရမ်းအဆင်ပြေ သွားပါပြီ ညီလေး အကို မှာထားတဲ့မျက်နာ ကို ဆံပင် ပုံစံ ပြောင်တဲ့ ဆောဝဲလ် လေး ရှာပေးအုံ နော် ကျေးဇူးအထူး ပါပဲ ညီလေး နေမင်းမောင်၊ ညဏ်ပညာ ဒီထက်မက တိုးပွာပြီ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ညီလေး ။ ကိုဇော်ဌေး
သားသား October 17, 2011 at 1:11 PM
အကိုရေတစိတ်လောက်ကူညီပါဦး..ISO......နဲ့လည်းဘန်းပြီးသွားပြီ ဖွင့်လိုက်ရင် error ပဲတက်တက်လာတယ် အကိုပေးထားတဲ့ error ရှင်းနည်းနဲ့လည်းရှင်းကြည်တယ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်အကို အားတဲ့အခါကြရင်တစိတ်လောက်ကူညီပေးပါဦးနော်..ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်......
နေမင်းမောင် October 18, 2011 at 4:12 AM
ဘယ်လို Error မျိုးတက်တာလဲမသိဘူးအစ်ကိုရေ
ကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်လောက် Reply လေးပြန်ပေးပါ ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
သားသား October 19, 2011 at 11:43 PM
အကိုရေ Error ကတော့အဆင်ပြေတယ် အသံတော့ကြားနေရပြီ ရုပ်မမြင်ရသေးဘူးအကိုရေကျနော်ကြိုးစားနေသေးတယ် အကိုကိုအလုပ်ရှုပ်မိစေခဲ့တယ် တောင်းပန်ပါတယ်...
အောင်သူရိန် November 2, 2011 at 8:25 PM
ဒေါင်းသွားပြီင်္နော်။ sniper game ဆို
sleep November 6, 2011 at 3:17 AM
ဖြေနည်းလေးကိုတချက်လောက် video ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးပါလား......ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အောင်သူရိန် November 6, 2011 at 10:03 PM
အကိုရေ အကိုပေးတဲ့ d3dx9_39.dll ဖိုင်ကို
ဒါပေမဲ့ ဖွင့်လိုက်ရင် The program can't start because d3dx9_39.dll is missing from your
computer.Try reinstalling the program
to fix this problem ဆိုတဲ့ error ပဲတက်လာ
အကို၊ ကူညီလက်စနဲ့ ဆက်ပြီး ကူညီပေးပါဦး
လို့ အားနာနာနဲ့ပဲ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အကို။
patrick November 8, 2011 at 10:37 PM
အပိုင်း ၅ က ဒေါင်းလို့မရဘူးအကို.....
အင်စတောလုပ်ပြီးမှ serial တောင်းနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကို ကျေးဇူးပဲနော်
ဗေဒါ November 23, 2011 at 8:47 AM
မရဘူးအကိုရေ ကူညီပါဦး serial key တောင်းနေလို့ပါဗျ။
အောင်အောင် November 23, 2011 at 8:42 PM
comment မှာကြည့်လိုက်တော့ အဆင်မပြေတဲ့ သူတွေ အရမ်းများနေတယ်
အကို ဒါပေမဲ့ လိုချင်လွန်းလို့ စပြီးဒေါင်းနေပြီအကို။
အကိုရေwinrar ကိုဖါင့်တာarro တွေတက်လာလို့iso fileကိုကူးလို့မ၇ဘူးဖြစ်နေတယ်..
sawhtoowar December 11, 2011 at 10:40 PM
Tay Zar December 16, 2011 at 8:34 PM
rar file 22 ခု ကိုဖြည်ပြီးတော့ rar ဖိုင်တွေအများကြီး ထပ်ထွက်လာတယ်နော်..... အဲတာတွေကိုလည်း ဖြည်လိုက်တာ iso ဖိုင်တစ်ခုရတယ်...ဘာတွေ ဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူး အကို...
အချိန်ရရင် install လုပ်တဲ့ instruction လေ ထပ်ဖြည့်ပေးပါလား ဟင်။ အရမ်းကစားချင်နေလို့ပါ ..ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ...အကို
နောက်တာ win rar နဲ့တခါတလေမရရင် 7-zip နဲ့ဖြည်ကြည့်ပါ နောက် .dll ဖိုင်တွေကို
system 32 ထဲထည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ကိုဆော့တဲ့ဂိမ်းထဲကိုထည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်
ကိုနေမင်းမောင် ခင်ဗျ ဒေါင်းပြီး install လဲလုပ်ပြီးပြီ ဗျ ဒါပေမဲက serial တောင်းနေလို့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလုပ်ပါဦး ကစားချင်လို့ပါ ကြိုက်ချင်းတူတယ်ဆိုတော့ စာနာတတ်မှာပေါ့ လုပ်ပါဗျ ကစားချင်လို့
Friends January 15, 2012 at 1:00 PM
အကိုရေ မရဘူး။ဗျို့ဒီဂိမ်းကစားချင်တာလက်ကိုယားနေဒါပဲ။ Notepad ထဲမှာ အပိုင်း က ၂၁ ဖိုင်အတွက် Link ပဲရှိတယ်။ အဲ့ ဒါ နောက်တစ်ဖိုင်က ဘယ်မှာတင်ထားဒါလဲဗျို့၂၁ ဖိုင်လုံးဒေါင်းပြီးမှ ဘယ်ဖိုင်ကပျောက်နေမှန်းမသိဘူးဗျို့ 
serial key တောင်းနေတယ် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူး
Thank U ...for all ...PES 2012 Patch installer footballgame free download
....I want pppppppppppppp eeeeeeeeeeeeee
ppp pppp eee
pppppppppppppp eeeeeeeeeeeeee S
winminhtoo7 March 15, 2012 at 11:36 AM
ဟင်းးးးးးးး အပေါ်မှာအော်နေတာကတော့ မရဘူးအစ်ကိုရေ ဆိုတာတွေချည်းဘဲ။ ကျွန်တော်လဲ
ကြိုက်လွန်းလို့ ဒေါင်းပြီဗျို့။ မရရင်တော့ ကူညီပါအုံးနော် ကိုနေမင်းမောင်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ..................................။
winminhtoo7 March 15, 2012 at 11:41 AM
winminhtoo7 March 18, 2012 at 5:45 PM
အစ်ကိုရေ serial key လေးတင်ပေးပါအုံးနော်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် serial key ဘဲလိုတော့တယ် ကူညီပါအုံးနော်။ အစ်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။
freenews May 2, 2012 at 12:02 AM
Myanmar Maung May 18, 2012 at 7:25 PM
Thank you,but I can't continue downloading Part(10 to end) because of coming up an error.Please help me brother. Kyay Zue Thin Par Tal.
Anonymous July 7, 2012 at 7:24 PM
konaing20099 August 16, 2012 at 12:48 PM
konaing20099 August 19, 2012 at 11:01 AM
ကိုနေမင်း ကူလုပ်ပေးလို့ရမလား ဂိမ်းတွေယူလို့မရလို့ပါ အားကိုးပါတယ်အကိုရယ်............။
Min Oo August 23, 2012 at 9:51 AM
ကိုနေမင်းရေဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်...files က not found တက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲ.......
လွမ်း ဗေဒါ August 27, 2012 at 2:19 AM
ကိုနေမင်း ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကူညီပေးပါလား ဒေါင်းလို့မရဖြစ်နေလို့ပါ မဒေါင်းတက်တော့ပါဘူး ကိုနေမင်း အားကိုးပါတယ်နော်
kk yy March 4, 2016 at 12:00 PM
အကို window 8 မှာကစားလို့ရလားခင်ဗျာ့ ရရတော့ဒေါင်းမလို့ မရရင်တော့ မဒေါင်းတော့ပါဘူး